Jaakada raadraaca dhogorta maqaarka ee ragga ee leh warshad jiilaalka safka ah iyo soosaarayaasha | Dufiest
Jaakada raadraaca dhogorta ragga ee Polar leh jiilaalka safka ah
Jaakada jiilaalka wadada waa mid aad ufiican oo raaxo leh guriga iyo socodka iyo iibinta anaga oo ah qiimaha jumlada .Waxaan nahay soosaaraha gaarka ah iyo soo-saaraha dharka isboortiga ee Shiinaha. Waxaan u isticmaalnaa dhar kala duwan sida suufka, acylic, polyester iyo Dumarka hoodie waxaa lagu heli karaa qiimo jumlad ah. Macaamiilku waxay ku iibsan karaan hoodie jumladle tiro aad u tiro badan AT qiimaha tartanka AS isboortiga DUFIEST waa soo saare gaar ah oo ka socda Shiinaha, jumladle, dhoofiyaha iyo warshadda dharka isboortiga, hoodies ， track jackets and bottom, T-shirt, Tank top and fit calim dress.
Jaakadda raadraaca ee dusha sare ee haweenka ayaa ah mid aad muhiim ugu ah dadka jecel koritaanka Iyada oo la adeegsanayo naqshad cusub ama naqshad shaqsiyeed oo ku saabsan dhogorta dhogorta leh iyo tan cirifka ah, tani waxay noqon doontaa hoodieada cusub ee aad ugu jeceshahay.
Muuqaalka shaqeynaya ee jaakadu waa muuqaalka kore ee Hooded Coat, oo badanaa laga sameeyo walxaha biyuhu xiraan. Tani waxay la xiriirtaa ujeedka asalka ah ee naqshadeeyaha. Markaad nashqadeynayso koofiyadda, jaakad noocan ah waxay aad uga walaacsan tahay kuleylka guud marka aad banaanka ku xiraneyso. Si looga dhigo qofka xiran inuu yeesho tallaabooyin kaameelida kuleylka ka wanaagsan, waxaa fiican in la doorto dharka ugu dhow ee la xidho marka la iswaafajinayo. Isku darka Coat Hooded wuxuu muujin karaa guud ahaan shaqada ilaalinta kuleylka, taas oo sidoo kale la xiriirta maaddadeeda biyuhu. Haddii aad fiiro gaar ah u yeelatid astaantan, waxaad kuheli kartaa muujinta wanaagsan ee xirashada, taas oo sidoo kale ah astaamaha nooca jaakad noocan ah.
Hore: Jaakad track halxiraale midabo leh oo loogu talagalay ragga
Xiga: Ragga raadkiisa hoose